Nyaya dzeVatengi - Jesson Mureza Arts & Crafts Co., Ltd.
Tsika yakadhindwa yekushambadzira matende uye logo tafura inovhara anobatsira kuvaka inoyevedza dumba rekupa zvimwe zvinwiwa uye yemahara zvigadzirwa sampuli kune vanhu vanouya nepo.
Paunoronga kubata diki yekuratidzira yekunze pamberi pechitoro chako, iwe uchazoda iri nyore asi inoshanda chishandiso kuti iite yakakosha. Tsika yakadhindwa logo tende inoita senge yakanakisa sarudzo nekuti haigone chete kupa pekugara asiwo inodziya nzvimbo. Zvakare, sezvo isu tichiwanzo kuva nezvimwe zvigadzirwa zvechigadzirwa zvinoda kuratidzwa.
Tarisa Ichi Chigadzirwa
Chero nguva iwe paunoda kuendesa imwe yekushambadzira info munzvimbo yakavhurika, tsika-yakagadzirirwa feather mireza inokushamisa iwe neinoshamisa yekuratidzira mhedzisiro.
Pese paunoda kuita mushandirapamwe wekushambadzira, une zvinhu zvishoma zvekufunga nezvazvo, sekuti vateereri vako ndiani uye mashandisiro aungaita nzvimbo yekuratidzira. Mapaki kana rimwe greenbelt iparadhiso yevanoda kugwinya uye nzvimbo dzakanaka dzekuti vanhu vafambe.
Kudhinda zita rekirabhu yako uye webhusaiti patende yedenga chinhu chinotonhorera. Iyo tende haingogone chete kupa pekugara asiwo inosimudzira mamiriro acho.
Iwe une kirabhu yenguva dzose yekudzidzira kana mitambo yekunze? Uri kutambura here kuwana pekugara pekuzorora kana nzvimbo yekuchengetera nhengo dzechikwata 'zvinhu? Uine tende rekunze rekuvhara denga, matambudziko ako ese anogona kugadziriswa. Mumwe munhu anofunga kuti tende risina chinhu raizoshandira chiitiko ichi